Mukhtaar Roobow “haddii siddaan jano lagu rabo jidkeedii midkaan ma ahan ee Towbad keena”. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Mukhtaar Roobow “haddii siddaan jano lagu rabo jidkeedii midkaan ma ahan ee...
Mukhtaar Roobow “haddii siddaan jano lagu rabo jidkeedii midkaan ma ahan ee Towbad keena”.
Muqdisho (SONNA) Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur oo horay uga tirsanaa Kooxda Al-shabaab oo shir jaraa’id ku qabtay Xarunta Gurmad Qaran ee Magaalada Muqdisho ayaa si kulul u canbaareeyey Weerarkii wuxuushnimada ahaa ee ay kooxda Al-shabaab ka geysteen Isgooska Soobe ee Magaaladda Muqdisho.
Sheekh Mukhtaar Roobow ayaa sheegay in Kooxda Al-shabaab ay caadeysteen Xasuuqa Shacabka Soomaaliyeed ayagoo sidaan oo kale u qarxiyey meelo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya.
Wadaadka ayaa sheegay in asaga iyo shabaab waxa ay isku qabteen in ay ugu weyneed in aysan Shacabka dhib u geysan isagoo sheegay in ay ka biyo diideen dalabkiisa sidaana uu uga baxay ku dhawaad toban sano ka hor.
Sheekh Mukhtaar Roobow ayaa Kooxaha Nabad diidka Al-shabaab ugu baaqay in ay Alle u towbad keenaan islamarkaan fikradaha qaldan ay kasoo laabtaan waxana una sheegay in wadad ay ku socdaan aysan ahayn wado Jano lagu raadiyo.
Previous articleTaliyaha cusub ee CXD oo xilka si rasmi ah ula wareegay